Ụtọ cherry Leningrad ojii
Ma eleghị anya, mmadụ ole na ole hụrụ mkpụrụ osisi a mara mma nke dị n'ebe ndịda mara na e nwere ihe dị iche iche ụdị cherị dị ụtọ. Ọzọkwa, kwa afọ ọnụ ọgụgụ a na-amụba. Ya mere, ị nwere ohere ọ bụla ịhọrọ kpọmkwem ụdị udara dị ụtọ nke ga-eto nke ọma na mpaghara gị, na-eburu atụmatụ niile nke ihu igwe na ala ya.
"Diver Black" - ihe kachasị dị iche iche nke ụdị dịgasị iche iche, yana ndụmọdụ gbasara nlekọta na akuku
Ụdị dị iche iche nwere ọtụtụ aha. Ị nwere ike izute ya dịka "South Coast" dị ụtọ, na "South Coast Red" na "Bigarro Diber" (na-asọpụrụ onye na-elekọta ubi na-agbasa ya). Ma ka, aha nke Cherries "Diber Black" ka ukwuu ka ọ bụ uru ya kacha mma na mkpụrụ osisi na-atọ ụtọ. Anyị ga-ama gị atụmatụ ya, iwu nke ịkụ ma na-elekọta.
Anyị na-amata ọkwa nke ụtọ cherry "Valery Chkalov"
Amaghị m banyere gị, ma enwere m naanị otu echiche banyere oge a na-atọ ụtọ nke okpomọkụ a, enwere ọchịchọ siri ike ịnwale ya. E nwere ọtụtụ ụdị dị iche iche dị ụtọ: site na acha uhie uhie? gaa na-acha ọcha burgundy na odo. Cherry, nke bụ onye ọbịa nke isiokwu anyị taa, dịka Valeria n'etiti ndị mmadụ.
Ụtọ udara Iput
Na-ekwu okwu banyere ụdị cherị kacha mma, ọ dị mkpa ịkpọ oku dị iche iche. Enwere ike iji nlezianya mee ka anyị nye anyị mkpụrụ osisi na-esi ísì uto. Anyị na-enye ndị na-agụ akwụkwọ nwere mmasị iji tụlee nke a dịgasị iche iche. Na Iput ụtọ udara iche iche na-ezo aka oyi-hardy, skoroplodny iche na nkezi mkpụrụ na mkpụrụ mbụ ripening.
Ụtọ udara "Regina"
Udara mkpụrụ osisi tomato na-emekarị na ọkara nke abụọ nke ọnwa June. N'ihi ndụ dị mkpụmkpụ nke tomato ndị a, n'ọnwa ndị ọzọ, ọ gaghị ekwe omume iri mkpụrụ osisi ya dị ụtọ. Na nke a, ga-amasị ọ bụla cherị iche "Regina", nke na-abịa n'oge ripening iche. Anyị ga-ekpughe ihe nzuzo niile dị iche iche a dị iche iche na ịmatakwu iwu nke akuku.
Akpa "obi obi"
Onye ọ bụla na-achọ ubi na-achọ ịkụ n'ubi ya naanị ụdị osisi dị iche iche kachasị mma iji nwee ike ịba ụba n'ubi. Otú ọ dị, uto na agba nke mmasị niile dị iche. Ya mere, iji gbasawanye ihe ọmụma nke cherị, anyị ga-eme ka ị mara ụdị osisi dị iche iche nke ubi a - "Bullish Heart".
Ezi udara "Revna"
Ụdị cherị dị iche iche dị nnọọ ka nne na nna ya - ụtọ cherry "Pink Bryansk", ma a ka nwere ọtụtụ esemokwu. Ma ọ bụrụ na ị kpebie ịkụkọta udị dị ụtọ na ibé gị, ọ dị ezigbo mkpa ịmata ihe niile banyere mkpụrụ osisi, osisi, Ome, uru na ọghọm dị iche iche. Ya mere, tụlee ntụgharị dị iche iche "Revna" ma mụta banyere atụmatụ nke ịgha mkpụrụ ya na osisi nlekọta ya.
Ụtọ udara "Bryansk Pink"
N'etiti ụdị dị iche iche udara dị ụtọ "Bryansk Pink" nwere ebe pụrụ iche. Nke a dịgasị iche iche apụtaghị ogologo oge gara aga na State Register nke Russia, mana n'ihi na mkpụrụ osisi na ọdịdị ha dị ụtọ, a na-achọta ya n'ọtụtụ ebe nke ndị na-elekọta ubi na-amị amị taa. Anyị ga-agwa gị gbasara atụmatụ ya na otu esi akụ na ilekọta osisi.
Ụtọ Cherry "Cherry"
Cherị enweghị ike ịnya isi nke nnukwu mkpụrụ ha, dị ka mkpụrụ osisi nkume ndị ọzọ. Otú ọ dị, e nwere otu ụdị dị ụtọ nke dị iche iche, nke dị na ntanye na-enweghị atụ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị dike. N'ime ndị a, ọ bara uru na-echeta ọtụtụ "Krupnoplodnaya" ụtọ udara, aha nke na-ekwu maka onwe ya.